Admin – Online Nepalaja
काठमाडौं । साताको पाँचौँ कारोबार दिन बिहीबार सुनको भाउ पुनः ओरालो लागेको छ। नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार आज सुनको भाउ तोलामा १ हजार रुपैयाँले घटेको छ। यो गिरावटसँगै आज प्रतितोला फाइन गोल्ड ८६ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८६ हजार ५० रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबार भने सुनका भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँले बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ८७ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८७ हजार ५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। गत मंगलबार भने सुनको भाउ तोलामा एकैदिन १ हजार ७०० रुपैयाँले घटेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ८७ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ८६ हजार ५५० रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। गत सोमबार तोलामा ४०० रुपैयाँले बढेको सुनको भाउ आइतबार भने तोलामा ५०० रुपैयाँले ओरालो लागेको थियो। आज चाँदीको भाउ पनि तोलामा ३० रुपैयाँले घटेर १ हजार २८५ रुपैयाँ कायम भएको छ। हिजो बुधबा
काठमाडौं । कीर्तिपुरस्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न विषय अध्यापन गराउने केन्द्रीय विभागका शौचालयहरुमा अश्लील साहित्यको भण्डार पाइन्छ । मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागको पहलमा त्रिविको घडीघरमा रहेको शौचालय सफा गर्ने क्रममा प्राज्ञिक संस्थाको शौचालय भन्नै लाजलाग्ने वस्तु भेटिएको थियो । साथमा शौचालयको भित्तामा अश्लील कुराहरु पर्याप्त लेखिएका थिए । घडीघरको बँगैचा, शौचालय एवं अन्य संरचनाको मर्मतसंहारका योजनाकार मानवशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख डम्बर चेम्जोङ शौचालयको विकास र त्यसको पर्याप्तता मान्छेको मानसिकतासँग जोडिएको स्मरण गर्छन् । ‘विदेशी पुस्तकालयहरूमा सबैभन्दा पहिलो पूर्वाधार नै शौचालयबाट हुन्छ । पर्याप्त शौचालय बनाइन्छ ताकि कतै पढ्न आएको विद्यार्थीले शौच इच्छाका कारण नै आफ्नो पढाइलाई बिथोल्नु नपरोस् । शौचालयमा कोरिने ती अश्लील लेखाइहरू भियतनाम, थाइल्याण्ड जस्ता देशबाट विकास भएक
एजेन्सी । एउटा यस्तो जीवन उपयोगी टिप्स भनेर सोसल मिडियामा राखिएको कुरा अहिले भाईरल छ । कारण थाहा पाउँदा जो कोही चकित हुनेछन् । सोसल साइटमा कोलिन नामकी महिलाद्वारा सेयर गरिएको फोटो भाइरल भइरहेको छ । यो पोष्टमा कोलीनले दिएको जानकारी अनुसार उनले तीन सन्तानलाई जन्म दिएपछि उनको फिगर नराम्रोसँग बिग्रिएको थियो । आफ्नो शरिरलाई फिर्ता पाउनका लागि उनले चमत्कारिक तरिका अपनाए । यो तरिकालाई उनले केही रातका लागि प्रयोग गरिन् र नतिजा देखेर कोलीन निकै खुसी भएको उनले सोसल साइटमा पोष्ट गरेकी छिन् । कोलीनको दाबी अनुसार यो तरिकाले निकै सजिलै बढेको पेटलाई कम गर्न सकिन्छ । कोलीनले मार्केटबाट सिविड (समुन्द्री झार) लोशन खरिद गरे । यसका साथै, पेटमा बाँध्नका लागि प्लाष्टिकको आवश्यकता हुन्छ । कोलीनले केही रातका लागि आफ्नो पेटमा सिविड लोशन लगाएपछि प्लाष्टिकले बाँधिन् । प्लाष्टिकलाई पेटमा अड्काउनका कोलीनले त्
लोक गायीका तथा कलाकार ज्याती मगरलाई निकै बिन्दास महिलाका रुपमा हेरिन्छ । उनी गायनमा मात्र नभएर नाचमा पनि उत्तिकै पारंगत छन् । उनले एक नाच प्रतियोगीमा पनि निकै राम्रो प्रतिभा देखाइन् । उनी गीत गाउँदा संगै स्टेजमा नाच्छिन् । त्यसैले पनि उनको माग यस्ता कार्यक्रमहरुमा हुने गर्छन । तर निकै फरासिली र बोल्न नहिचकिचाउने ज्यातीले ब्यक्तिगत जिवनमा भने सोच्ने नसकेका घटना भोगेकी छन् । उनी महिला माथि इंकित गरेर बनाइएका कतिपय भनाई प्रति ज्योती सहमत छैनन् । भन्छिन्, एउटा घर राम्रो हुन महिलाको निकै राम्रो भूमिका हुन्छ भनिन्छ त्यो भनाई प्रति म सहमत छैन । पुरुषको कुनै जिम्मेवारी हुँदैन ? उनको प्रश्न छ । उनले आफु दागंवाट काठमाडौ आएर आफ्नो ब्यवसायीक जिवन सुरुवात गर्दाको अनुभवले उनको आँखामा आँशु आयो । आफुलाई अलिकति भाग्यमानी भएको ठान्ने ज्योती आफु निडर भएका कारण हतोस्तसाही नभएको बताइन् । उनले भर्खर काठमा
धादिङ्ग जिल्लाको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिका वडा नं १ खोल्सी नजिकै सडक खन्ने क्रममा स्थानीय ४५ बर्षीय सरस्वती कुमाललाई खाडलमा पुरिएको छ। घास काट्न गएकी महिलालाई पुरेर मृ त्यु भएपछि डोजरमा आ गज नी गरेका हुन् । महिलालाई पुरे पछि डोजर चालक भने फरार भएका छन। सडक पिचका लागि बाटो फराकिलो पार्ने क्रममा बाटो ख न्दै थियो। बाटो बनाउन को लागि हेरचाह गर्ने व्यक्ति कहाँ गएको थियो ,त्यसले के हेरेको थियो भनि गाउलेले आ क्रो श पोखेका छन। डोजरको ठ’क्क’ रबाट महिलाको मृत्यु भएपछि डोजरमा आग’ज’नी भएको छ । डोजरको ठ’क्क’र पछि घाईते महिलालाई डोजर चालकले खाल्टो खनी पु’र्न लागेपछि स्थानीयहरुले डोजरमा आ’ग जनी गरेका हुन् । सडक पिचका लागि बाटो फराकिलो पार्ने क्रममा बाटो खन्दै गर्दा पैदल यात्री त्रिपुरासुन्दरी गाउँपलिका वडा नम्बर १ का ४५ वर्षीय सरस्वती कुमाल घाइते भएको र घाइते कुमाललाइ अपरेटरले खा’ल्टो ख’नेर गा’ड्न खो
आचलले सारि लगाउँदा पेट देखिएपछि.. (भिडियो)
नाई नभन्नु ल ४ बाट नेपाली रजतपटमा प्रवेश गरेकि नायिका तथा मोडल आँचल शर्माले सुटिङका क्रममा सारि लगाउँदा पेट देखिने भन्दै डराएको भिडियो अहिले समाजिक संजालमा भाइरल बनिरहेको छ । उनले एक म्युजिक भिडियोको सुटिङमा सारि लगाउँदा पेट देखिएको भन्दै गुनासो गरेकि छिन् । पहिलो चलचित्रनै सफल भएपछि उनले शत्रु गते र जोनि जेन्टलम्यान नामक चलचित्रमा अभिनय गरेकि छिन् । नेपाली चलचित्र उद्योगमा प्रवेश गर्नु अगावै उनी एक सौन्दर्य प्रतियोगिता जितेकी थिइन् । बिहेपछि झनै विन्दास आँचलः नायिका शर्माले आफू बिहेपछि झनै विन्दास भएको बताएकी छिन् । लकडाउनको समयमा जीम जाने, मन परेका परिकार खाने र परिवारसँगै समय बिताएको बताउने आँचल अहिले भने म्यूजिक भिडियोको छायांकनमा व्यस्त छिन् । आँचललाई उनका शुभचिन्तक तथा आफन्तले बिहेपछि झनै सुन्दर देखिएको भनेर प्रतिक्रिया दिने गरेका छन् । आँचल भन्छिन्, ‘मलाई त धेरै फ्यानहरुले बिहेपछ
काठमाडौं । भारतको कर्नाटक राज्यका मन्त्री रमेश जर्किहोलीले बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ । आफूवि रु द्ध यौ न दु रा चा रसम्बन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि पदबाट राजीनामा दिन उहाँ बाध्य हुनुभएको हो ।उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्नका लागि कर्नाटक राज्यका मुख्यमन्त्रीले राज्यपाल भाजुभाइ भालालाई सिफारिस गर्नुभएको छ । जर्किहोलीले जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको थियो । उहाँको राजीनामा स्वीकृत गर्नका लागि कर्नाटक राज्यका मुख्यमन्त्रीले राज्यपाल भाजुभाइ भालालाई सिफारिस गर्नुभएको छ । जर्किहोलीले जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आउनु भएको थियो । उहाँले दिनुभएको राजीनामा पत्रमा घटनाका बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्य तथ्य सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ । तर अहिलेलाई भने आफूले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएकाले स्वीकृत गर्न पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ । कर्नाटकका अर्का मन्त्र
एजेन्सी – फिल्म बी हो तो ऐसी’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेका चर्चित नायक हुन् सलमान खान । उनले फिल्म बी हो तो ऐसी’बाटनै फिल्मी क्षेत्रमा पाइला टेकेका हुन् । उनको फिल्म बी हो तो ऐसी’सन् १९८९ मा रिलिज भएको थियो । तर फिल्मले राम्रो व्यापार गर्ने सकेन् पहिलो फिल्मनै फ्लप भएका कारण उनि निकै चिन्तित भएका थिए । उनिसंग रेखाले पनि अभिनय गरेकी थिइन । हरेक फिल्ममा सलमान फरक फरक अबतारमा देखा परेका हुन्छन् । उनले पहिलो फिल्मबाट नै धेरै फ्यान कमाएका हुन् । तर सलमानले पचास कटदा पनि विाह गरेका छैनन् । फ्यानहरुलाई उनको विहेको चासोको बिषय बनेको छ । सलमानले बेलाबेलामा आफ्ना तस्विर भिडियो हरु शेयर गरेर चर्चामा आउने गर्दछन् । उनि प्रेमका कारण पनि चर्चामा आउने गर्दछन् । उनि अहिले मात्र नभई बाल्यकालमा पनि उतिकै राम्रो र ट्यालेन्ट थिए । हेर्नुहोस बाल्यकालका तस्विर
प्राय केटा जसको फिगर परफेक्ट हुन्छ र फिटनेस फ्रीक हुन्छ यस्ती केटीसँग आकर्षित हुन्छन् । तर थोरै मान्छेलाई थाहा छ कि पातली श्रीमती भन्दा मोटी श्रीमती राम्रो साबित हुने गर्छ। यो एक खोजमा साबित भएको हो। अध्ययनमा यो कुरा बाहिर आएको छ कि जुन मान्छेको श्रीमती मोटी हुन्छ तिनीहरु आफ्नो वैवाहिक जीवनमा निकै खुशी रहन्छन्। तपाईहरुलाई बताउछौ कि मोटी केटीलाई बिहे गर्नुको फाइदा। १. पातली केटीको ठाउँमा मोटी केटीले आफ्नो श्रीमानलाई १० गुणा धेरै माया गर्छ। साथै उनी आफ्नो श्रीमानलाई जिम वा फिट रहनको लागि पनि फोर्स गर्दैन। यति मात्र नभई मोटी केटि आफ्नो श्रीमान र आफ्नो परिवारलाई खुशी राख्नको लागि कोसिस गर्छन् र कहिले पनि पार्टनरको साथ छोड्दैनन् । २. मोटी केटीहरु दिमाखको सट्टा हरेक काम मनले गर्छन्। यति मात्र नभई यिनीहरुले कुनै पनि काम आफ्नो परिवारको सहमति बिना गर्दैनन्। यस्ती केटीले परिवारको मान्छेको ह
अधिकांस किशोर र वयस्कलाई डण्डिफोरको समस्या हुने गर्दछ । हर्मोनल परिवर्तन र बाह्य कारकतत्व डण्डिफोरको साधारण कारण हुन्। यो अप्रिय स्थितीको असर तपाईंको आन्तरिक स्वास्थ्यमा पनि पर्न सक्छ । डण्डिफोर विशेषगरी अनुहारमा आउने गर्दछ । यही डण्डिफोर तपाईंको आन्तरिक स्वास्थ्यको चित्रणसमेत हो । कुनै व्यक्तिहरुलाई डण्डिफोरले निकै सताइरहेको हुन्छ, यसको कारण बारे थाहा नभएर उचित उपचार पनि गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । आज हामी तपाईंलाई डण्डिफोरको वास्तविक कारण पत्ता लगाउनमा सहयोग पुर्याउँछौं । यसले तपाईंलाई डण्डिफोरको निदान गर्नमा पक्कै पनि सहयोगी भूमिका खेल्नेछ । १. निधारमा डण्डिफोरः निधारमा डण्डिफोरका कारण पाचनमा गडबडी अथवा आहारमा पानीको कमीका आउने गर्दछ । पाचनमा गडबडी र आहारमा पानीको कमीले शरिरमा टक्सिनको निर्माण हुने गर्दछ । यसबाट बच्न चाहनुहुन्छ भने आफ्नो आहारमा एन्टीअक्सीडेन्टयुक्त खाद्य पदार्थका साथै ग्